Mareykanka Oo Balan qaad Cusub U Sameyay somaaliya – Al-Hurriyah
Magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Drs Fawsiya Abiikar Nuur iyo Danjiraha Mareyanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo Madaxda Hay’adda Mareykanka u qaabilsan dhanka Horumarka ee loosoo gaabiyo (USAID).
Kulanka oo ahaa mid wicitaan ah, sabab la xiriirta xaaladda ka dhalatay Covid-19 (Vedio Conference) waxa ay kaga wada hadleen dadaalada Soomaaliya ee kahor tagga cudurkaan oo faafay maalmihii lasoo dhaafay.
Xubnaha Mareykanka ee Safaaradda iyo Hay’adda Horumarka u qaabilsan ayaa ballanqaaday in Soomaaliya ay gacan ka siinayaan kahor tagga faafidda cudurka Coronavirus oo maraya 436 iyo dhimashada 23-ruux.
“Wasiirka ayaa Dowladda Maraykan-ka uga mahadcelisay dalaadallada ay ka wadaan Soomaaliya ee ku aadan COVID-19, sidoo kalena kala hadashay sidii ay gacan buuxda uga geysan lahaayeen gurmadka wax looga qabanayo cudurka COVID-19” ayaa lagu yiri qoraalka lasoo dhigay bogga Wasaaradda Caafimaadka XFS.
Dowladda Maraykanka ayaa balan qaaday in ay Soomaaliya ka caawin doonaan xakamaynta iyo xal u helidda cudurka COVID-19 oo dadaalo kala duwan caalamka uga jira sidii loo ciribtiri lahaa.
Wararka aanu ka heleyno gobalka galgaduud ayaa sheegaya in uu halkaasi ka soconayo dagaal u dhaxeeya…
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS), Mudane; Cabdiraxmaan Ducaale…
Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo socdaal shaqo kusoo…
Qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa saameyn ku yeeshay Cayayaanka Anyaxa oo markii hore logu arkay meelo kamid ah gobolka Mudug. Anyaxa ayaa ku habsaday meelo ku dhow Feerfeer ee gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa dhibaato badan ku qaba. Anyaxa ayaa la sheegay…
Taliyaha Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM Gen. Tigabu Yilma iyo wafdi saraakiil ah uu hogaaminayo ayaa gaaray Degmada Dhoobley ee Gobalka Jubbada Hoose, iyadoo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay. Taliyaha ayaa booqday saldhigyada Ciidanka Kenya ee qeybta…